Umthandazo ukuze aphuphe ngam. ? Ngokuhlwanje uze ucinge ngam
Thandazela ukuba andiphuphe. Ingakhangeleka ngathi sisenzo sokuzingca kodwa inyani kukuba oku kunokuba njalo yemithandazo eyona nto inyanisekayo sinokuyenza kubomi bethu.
Ukungena kumaphupha omnye umntu kunokuba yinto enobuzaza ukuba akwenziwanga ngendlela enoxanduva, yiyo loo nto kufuneka sazi yonke into ethethwa sesi sivakalisi ngaphambi kokwenza oko ukuze sikwazi ukwenza ngokubonakalayo.
1 Yintoni lo Mthandazo wokuba uphuphe ngam?
2 Umthandazo wokuphupha nam ngokuhlwanje
3 Umthandazo wokucinga ngam kwaye uphuphe ngam
4 Umthandazo kuKufa okungcwele ukuba uphuphe nam
5 Umthandazo ukuze ndingalali ndicinga ngam
5.1 Ngaba ndingatsho yonke imithandazo?
Yintoni lento Umthandazo wokuphupha nam?
Injongo eyinyani icacile, ukuba loo mntu aphuphe ngawe, nokuba emaphupheni ungazilibala ngesiqu sakho.
Se ungenza isicelo kwiimeko zobudlelwane bomgama Xa ugqibile, omnye umntu unokuba sengozini okanye kulula ukukulibala ngawe.
Batsho ukuba amaphupha anamandla kwaye yiyo loo nto sicela ikakhulu ukuhlala kubo ixesha elide ukuze uqinise iimvakalelo.
Lo mthandazo unokwenziwa ngawo onke amaxesha nakuzo zonke iindawo.
Ayinamsebenzi ukuba loo mntu unexesha elininzi engakhange asibone okanye athethe nathi, eyona nto ibalulekileyo kukuba ucinga kwaye aphuphe ngathi ngamaxesha onke.
Umthandazo wokuphupha nam ngokuhlwanje
Ndiphuphe nam namhlanje sithandwa sam,
Ewe, imiphefumlo yethu imiselwe ukuhlala kunye!
Ndiphuphe nam namhlanje, sithandwa esingapheliyo, kuba ndikho
Yonke into oyikhangeleyo;
Ndiyawadibanisa amandla esiphelo esiya kuwo
Kwingcinga zakho zobusuku bakho mfanekiso wam, mxholo wam
Kwaye nelizwi lam kwezi zenza ukuba
Ubukho kuwe ngobu busuku.
Sisonke siza kubhabha ngemitha engaziwayo;
Sisonke siya kuhamba ngolwandle kude;
Siyakonwabela nje amahlathi ashinyeneyo;
Ingcinga yakho iya kuba ngumda kodwa apho
Ukwenza oko, kuya kuhlala kunjalo kum kunye nam.
Ngamana la magama angafika engqondweni yakho kunye nokuba
Zanyibilika ngaphakathi kuwe ukuze
Into yokuba ndingaze ndibaleke emzimbeni wakho
Nokuba uvale nini na amehlo akho
Thatha ithuba lamandla omthandazo wokuphupha nam ngobu busuku.
Luhlobo olukhethekileyo lomthandazo kuba sicela ukuvela kumaphupha akho ngobo busuku sithandazayo.
Oku kuyenza nje onke anamandla kwaye asebenzayo.
Eyona nto inokwenzeka, emva kobo busuku safunda ngephupha awayenalo njengomntu nathi kuba wayeya kuzama ukunxibelelana nathi kuba amaphupha adla ngokuba namandla kakhulu.
Umthandazo wokucinga ngam kwaye uphuphe ngam
Nditsalele umnxeba ngoku, ngoku ngoku ...
(Chaza igama lomntu)
Ngeli xesha, naphi na. Okwalo mzuzu uza kubeka uxinzelelo lwakho kunye neengcinga zakho kum ...
(Chaza igama lakho)
Uyaqonda ukuba awuzukuphila ngaphandle kwam. Okwalo mzuzu uza kuqala ukulahla ikratshi lakho. Okwangoku uzimisele ukunditsalela umnxeba. Ngoku ucinga ngam ...
Ngaba uza kuzama ukuxhathisa? Sukuxhathisa. Ukuba ...
(Itsho igama lomntu) Ungandibizi ngoku, uza kunditsalela umnxeba kamva. Kodwa ngoku ungaqiniseka ukuba uza kunditsalela umnxeba.
Uyaqonda ukuba uyandithanda kwaye awunakuba ngaphandle kwam. Okwangoku ucinga ngam ...
(Chaza igama lakho) Ndibongoza iingelosi ezintathu, uMiguel, uGabriel noRafael, ukuba bakhanyise intliziyo yakho ...
(Chaza igama lomntu) kwaye ulungise nayiphi na imibuzo. Yintoni uMichael aya kuyigxotha kuwe ngumoya wobubi kunye nazo zonke iimpembelelo zobubi.
UGabriel uyakwazisa ... (Utsho igama lale mntu) igama lam, elibetha igama elithi "Uthando" endlebeni yakho kwaye uyandikhumbula ...
(Chaza igama lakho) Rafael ukusebenzisa i-balm yokuphilisa ukuphilisa ukungathembani okukhule entliziyweni yakho, kunye nokugcina isikalo "Uthando" kunye nomnqweno kum ovulekileyo ...
(Chaza igama lakho).
Ngena kwiingcinga zomnye umntu kwaye ubachaphazele ukuze silele uhlale uphupha ngathi Kubonakala ngathi sisicelo esizicingela kakhulu okanye esjijekileyo kwaye abanye banokucinga ukuba singabangeneleli ngenxa yokungena kwisazela somnye umntu ngaphandle kwemvume yabo, kodwa inyani kukuba sicela ummangaliso kuphela, sisebenzisa izixhobo zokomoya ezikholekileyo kuthi.
Kufuneka siqiniseke, siqinisekile ngokholo esi sivakalisi siza kwenza isiphumo esifunekayo ngaphandle kokubangela ungakhathazeki okanye ukuphazamiseka okungafunekiyo kwaye kule nto akukho nto ingcono kunokugcina intliziyo iphilile kwiminqweno emibi kunye namandla amabi.
Umthandazo kuKufa okungcwele ukuba uphuphe nam
Ngamandla weSanta Muerte kunye nemiphefumlo emithathu ebonwa nguSanta Muerte JOGF ngoku iza ngamandla kaSanta Muerte kunye nemiphefumlo emithathu uSanta Muerte awayibonayo iJoGF ngoku iza emva kweYJDC yam.
Uya kuza etyibilika kwaye eluthandweni lugcwele luthando; onomnqweno wokubuya ndicela uxolo ngobuxoki kwaye ubuze kum ukuthandana kunye nasemtshatweni ngokukhawuleza okukhulu.
Santa Muerte, I YJDC iya kuba nala mandla i-JOGF ekhohliweyo kwaye ishiye kwangoko nayiphi na ibhinqa elinokuthi libe entlokweni kwaye liphinde liqalise kwaye libhengeze ukuba bonke babone.
USanta Muerte ugcine iJOGF kude kuwo nawuphi na umfazi, ukuze entlokweni yakhe andikhangele kwi-YJDC yam ngalo lonke ixesha namhlanje kwaye uhlala efuna ukuba secaleni kwam, ukuba aqiniseke ukuba ndingumfazi ogqibeleleyo kuye, ukuba iJOGF Andikwazi ukuhlala ngaphandle kwe-YJDC yam kwaye iJOGF ihlala inomfanekiso wam kwiingcinga zayo, ngawo onke amaxesha obomi bayo ...
Ngoku apho ndikhona naye, IJGF izondijonga ngoba indlela acinga ngayo iku-YJDC yam ..
Kwaye xa uyokulala uphupha ngam naxa uvuka ucinga ukuba undifuna, xa usitya cinga ngam, xa unyathela ucinga ngam, ngawo onke amaxesha obomi bakho cinga nge-YJDC yam….
Lo mthandazo wokufa okungcwele ukuphupha nam ngomnye waziwa kakhulu.
Unamandla amakhulu kunye nemimangaliso Ewe, ukuza kuthi ga ngoku kukho imimangaliso emininzi engqinwa kwihlabathi liphela lezicelo eziphendulwe ngalo mbandela.
Uncedo olunamandla ukuze umntu okhethekileyo angayeki ukuphupha ngawe.
USanta Muerte unokuba sisihlobo sethu, onokusinceda kwezinye iimeko zothando apho sinokuba siphelelwe lithemba.
Umthandazo ukuze ndingalali ndicinga ngam
Ugqiba kwam ukuthetha la mazwi.
Owu sithandwa, uya kufumana umdla kwaye uphuphe ngam!
Okwangoku, ngenxa yobubi, umphefumlo wakho nowam
Abalali kunye ngoku, kodwa kufuneka ungenelelo kuphela
Kwimikhosi yesiphelo ukuze oku kuguqulwe kulunga.
Uya kuphupha ngam okunzulu,
Kwaye apho siyathandana ngokungafani nomnye!
Izibophelelo zethu ziya kugqitywa ukujoyina
Kwaye ekuvukeni uya kuba nothando olunzulu
Ukusukela ngubani okulinde ixesha elide kangaka.
Mamela la magama, zintanda, ziya kuba zizo eziya kukha amanzi
Uthando luya kuqhuma kokubini ukususela ngoku.
Kwangathi imikhosi ehlala ihamba nam ingabathatha kwaye
Thatha indawo yokuhlala kwaye, xa uwavala amehlo akho,
Yichithe ebusweni kwaye iprojekthi yam
Kwiphupha lakho lokuqala ngokuhlwanje.
Olu hlobo lomthandazo luyasebenza, njengoko iingcinga ziba ngamaza ukuba, njengolwandle, lungayeki ukuza nokuhamba, yonke le nto inenjongo yokuba lo mntu angalibali.
Ngesizathu esithile, singazifumana sikude kwaye sinesidingo sokubangela into kwisithandwa, ukuhlala sibekhona ngalo lonke ixesha kuba kukwimeko apho lo mthandazo ngokuthe ngqo uba yindlela yethu yokuphuma.
Ukufunda ukusebenzisa ezi zixhobo zokomoya kuthatha ixesha, kodwa eyona nto ibalulekileyo kukuhlala unokholo olomeleleyo kwaye ungagungqi.
Impendulo nguEwe ophakamayo.
Yonke imithandazo ilungiselelwe ukuba ilungele nganye nganye kwaye ibenze basebenze kwimeko nganye enokuphakama ebomini.
Nokuba kunzima kangakanani oko sikucelayo, kufuneka siqiniseke ukuba, ukuba sibuze ngokholo, yonke into inokufezekiswa nokuba kubonakala kungenjalo.
Ngaba uwuthanda umthandazo wokuba uphuphe ngam?
Imithandazo emi-4 yokunditsalela umnxeba
Ukuthandazwa kukaSanta Cyprian